सेनाको आलोचना गरेकी अधिकारकर्मी भागेर अमेरिका पुगिन्::देश र जनताप्रति समर्पित
सोमवार, अशोज २७, २०७६ | Monday 14th October 2019
सेनाको आलोचना गरेकी अधिकारकर्मी भागेर अमेरिका पुगिन्
सेनाविरुद्ध बोलेपछि महिनौँदेखि लुकेर बस्दै आएकी एक पाकिस्तानी मानव अधिकारकर्मीले देश छोडेकी छन्। देशव्यापी आफ्नो खोजी र आफूविरुद्धको यात्रा प्रतिबन्धलाई छल्दै अधिकारकर्मी गुललाई इस्माइल अमेरिका पुगेकी हुन्।
उनीमाथि “राज्यविरुद्धका गतिविधिमा संलग्न भएको” र “हिंसा फैलाएको” पाकिस्तानी अधिकारीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। समाचार संस्था एएफपीसँग कुरा गर्दै इस्माइलले आफ्नो ज्यानलाई खतरा भएकोले देश छोडेर भाग्न बाध्य भएको बताएकी छन्।
उनले भनिन्, “नभागेको भए मलाई जेल पुर्‍याइन्थ्यो र वर्षौँसम्म यातना दिइन्थ्यो र मेरो आवाज दबाइन्थ्यो।” इस्माइलका बुवाले बीबीसी उर्दूलाई बताए अनुसार उनीविरुद्ध पाकिस्तानी अदालतमा छवटा मुद्दा हालिएको छ। त्यसकारण आफ्नो जीवन गम्भीर खतरामा रहेको उनले निष्कर्ष निकालिन्।
उनले भने, “आफ्नो जीवन खतरामा रहेको र देश नछाडेमा जे पनि हुन सक्छ भनेर यो समयमा गुललाईले देश छाड्ने निर्णय गरेकी हुन्।” एउटा वक्तव्यमा अधिकारकर्मी इस्माइलले भनेकी छन्, “पछिल्ला केही महिना एकदम डरलाग्दो रहे। मलाई धम्की दिइयो, दुर्व्यवहार गरियो। म भाग्यमानी छु कि अहिलेसम्म जीवित छु।”
आफ्नो यात्रामाथि प्रतिबन्ध लगाइएकोले उनले देश कसरी छोडिन् भन्नेबारे उल्लेख गरेकी छैनन्। यद्यपि न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, “म कुनै विमानस्थलबाट चाहिँ उडिनँ।”
अमेरिकामा राजनीतिक शरणका लागि निवेदन दिएकी इस्माइल न्यूयोर्कमा आफ्नी बहिनीसँग बसिरहेकी छन्।
किन प्रहरीले इस्माइललाई खोजिरहेका थिए?
खासगरी महिला तथा बालिकाविरुद्धका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे इस्माइलले कैयौँ वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आएकी छन्। यद्यपि अफगानिस्तानसँगको सिमानामा पाकिस्तानी सेनाको कारबाहीका क्रममा महिलामाथि दुर्व्यवहार गरिएको भन्दै आवाज उठाउन थालेपछि उनी अधिकारीहरूको नजरमा पर्न गइन्। यसै हप्ता वाशिङटनमा एएफपीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, “मकहाँ आएर धेरै महिलाहरूले यौन दुर्व्यवहारका घटना नौलो नभएको बताए। त्यो वर्षौँदेखि हुँदै आएको छ।”
सन् २०१८ को अक्टोबर महिनामा लण्डनबाट फर्कने क्रममा इस्लामाबाद विमानस्थलबाट इस्माइललाई पहिलो पटक पक्राउ गरिएको थियो। त्यतिबेला उनीसहित १९ जनामाथि पाश्तुन तहफुज मुभमेन्टद्वारा आयोजित एउटा र्‍यालीमा राज्यविरुद्ध र सेनाविरुद्ध बोलेको आरोप लगाइएको थियो। पीटीएमका एकजना अभियानकर्मी अर्मान लुनीको हिरासतमा भएको मृत्युलाई लिएर गत फेब्रअरीमा उनलाई फेरि पक्राउ गरियो।
त्यतिबेला आफूलाई दुई दिनसम्म खाना र पानीविना चिसो कोठामा राखिएको उनले बताएकी छन्। तर गत मे महिनामा अन्तिम पटक पक्राउ गरिएपछि उनीमाथि राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लगाइयो। त्यसपछि उनले लुक्ने निर्णय गरिन्। त्यतिबेला एक १० वर्षीया पाश्तुन बालिकाको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनालाई लिएर उनले आवाज उठाइरहेकी थिइन्।
को हुन् गुललाई इस्माइल?
सोह्र वर्षको उमेरदेखि नै गुललाई इस्माइलले मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी छन्। उनी उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तानको ख्यबर पख्तुन्ख्वा प्रान्तकी हुन्। त्यहाँ उनले बालिकाहरूका लागि काम गर्ने उद्देश्यका साथ अवाएर गर्ल्स नामक एउटा गैरसरकारी संस्था स्थापना गरिन्।
घरेलु हिंसा र कम उमेरमा हुने विवाहविरुद्ध लगायतका विषयमा काम गर्न सन् २०१३ मा उनले सयजना महिला भएको एउटा समूह बनाइन्। आफूले गरेका कामका लागि उनले कैयौँ पुरस्कार पाएकी छन्। आफ्नो काम जोखिमपूर्ण छ भन्ने कुरा उनलाई शुरूदेखि नै थाहा थियो।
भारतले सुरु गर्यो हामी अन्त्य गरिदिन्छौ : इमरान खान
चिनले आफ्ना नागरिकलाई भन्याे कुरा ‘नबुझि बिहे नगर्नु’
भारतलाई सरप्राइज कार्वाही गर्ने पाकिस्तानी सेनाको चेतावनी
बैठक बस्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आगलागी
राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको तालिका सार्वजनिक
अप’राधका आ’रोपित चार ‘माननीयहरु’ ह’त्या आ’रोपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलम पक्राउ परेसँगै अप’राधमा मुछिएका बहालवाला सांसदको संख्या ४ पुगेको छ । निवर्तमान सभामुख एवं नेकपा...
सरकार सङ्ग रिसाए बाबुराम ,राष्ट्रपति सीसँग भेट नगराएपछी लेखे यस्तो स्टाटस….. पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुको भेटघाट नगराएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। दुई दिने राजकीय भ्रमण सकेर चिनियाँ राष्ट्रपति फर्किएको केही...
म छिट्टै चीन जान्छु,सीले निम्ता दिएका छन् : देउवा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एंव पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू छिट्टै चीन भ्रमणमा जाने बताएका छन्। दसैं, तिहार र छठका अवसरमा कांग्रेसले आइतबार आयोजना...
अप’राधका आ’रोपित चार ‘माननीयहरु’
ह’त्या आ’रोपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलम पक्राउ
आज असोज २७ गतेको राशिफल कसलाइ कति फलदायी
वि.सं.२०७६ साल असोज २७ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०१९
यी हुन् नेपाल-चीनबीच भएका २० सम्झौता
आइतवार, अशोज २६, २०७६
यी हुन् नेपाल-चीनबीच भएका २० सम्झौता १। नेपाल सरकार र चीनबीच सीमा
सरकार सङ्ग रिसाए बाबुराम ,राष्ट्रपति सीसँग भेट नगराएपछी लेखे यस्तो स्टाटस…..
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुको भेटघाट
म छिट्टै चीन जान्छु,सीले निम्ता दिएका छन् : देउवा
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एंव पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू